15 agba Eyeshadow Palette etemeete, High Pigmented, Waterproof &-adịte ọkachamara etemeete Matte Nudes Shimmer Natural Anya Shadow Easy ngwakọta.
Nke mbụ ：Ogologo Oge Jiri: Iji ihe a, ọ ga-anọ ogologo ụbọchị niile. Site na agba dị oke nro na ogologo oge, dobe anya mkpuchi anya gị zuru oke ogologo oge.
Igwe arụmọrụ na-arụ ọrụ dị iche iche - JOYO eyeshadow diski nwere ụdị 15 dị elu nke mgbanwe ndò anya, gụnyere agba 5 pearlescent na 10 eke eke matte. Obi ike, na-anọpụ iche, kwụpụta ma ọ bụ gwakọta.
Abụọ mbụ:15agba ntụ ntụ,N'iji ndo ndị a na-ejikarị eme ihe, na-eme ka agba akpụkpọ anụ kacha mma na ngwụcha eke. Ọ dị ezigbo mma ma dịkwa mma ma dị mfe iji tinye ya n'ụzọ dị mfe karị, ọ dị mfe itinye ya na ahịhịa mkpuchi, na-agwakọta nke ọma iji mepụta ndò ịchọrọ..
Na-adịgide adịgide na agba, na agba nke ukwuu na inogide agba, idebe zuru okè anya onyinyo etemeete. Onye ọkachamara na-ese ihe eji eme ihe na-atụ aro itinye akpụkpọ anụ nke dịkarịsịrị mma na anụ ahụ, site na ahịrị ntutu iji mee ka ọkpụkpụ nwee ya, iji hụ na mwebata na-enweghị ntụpọ nke onyinyo anya niile. Pink na-acha uhie uhie na ndị ọzọ.
Nke mbụ:Nri abalị nri ọ bụla palette mfe buildable eyeshades na-emegharị ka ọ bụla anụ ụda, ahighly pigmenti, ike adhesion. Ogologo oge, uwe elekere 8 nke na-adịghị adalata, ihe na-egosi mmiri, dobe anya mkpuchi anya gị zuru oke ogologo oge.
Nke mbụ:Ọkachamara egwurugwu ọkachamara, efere anya onyinyo a nwere 18 na-enwu gbaa site na-acha odo odo na pink na-egbuke egbuke, yana ihe niile achọrọ iji nyefee nku anya. Igwe diski a na-acha uhie uhie nke ukwuu ga-enyere gị aka ịmepụta ọdịdị mara mma.
Inyepu mmiri na-egbochi anwụ: agba na-adịgide adịgide, anya anya na-enwu gbaa, uwe na-adị mfe na nhicha dị mfe. Efere Eyeshadow anyị dị mfe iji (n'eziokwu, ọ kachasị mma iji mkpịsị aka mee karịa brushes).
Nhọrọ dị iche iche ịhọrọ site na: ọ dị mfe nchacha, dị mfe iji jikọta, na-enye gị ohere na ịdị mma na-enweghị atụ. Ọkachamara ntụ ntụ dị iche iche dị mma, mepụta anya ma ọ bụ anya kwa ụbọchị. Enwere ike itinye anya onyinyo anya a na ihu.
Mepụta etemeete na-akparaghị ókè, nke kwesịrị ekwesị maka oge dị iche iche, dị ka usoro ịme ihe kwa ụbọchị, ime etemeete, ihe ejije egwuregwu, na ọbụlagodi Ememe ezumike. Onyinye zuru oke maka umuaka, ndi nwanyi, ndi nwanyi, ubochi omumu, ekeresimesi, ubochi ndi nne, ubochi Valentine, wdg
Nke gara aga: Anya etemeete-BD15-oyi
Osote: Ihu etemeete-BD-ime ihiere
Anya Anya ọla edo
Anya Anya Halloween
Eke Anya Anya
Nlecha Anya Dị Mfe
Anwụrụ Anwụrụ Anwụrụ Anwụrụ
JOYO © Ikike niile echekwabara. Featured ngwaahịa, Sitemap, Obere lipstick, Ihe kacha mma, Shimmer Lipstick, Kacha mma ude Eyeshadow, Anya Anya ọla edo, Matte Eyeshadow Palette, Ngwa niile